बैंकहरुले सार्वजनिक गरे स्थिर ब्याजदर, अब कुनमा कति ?
काठमाडौं : इतिहासमै पहिलोपटक बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरी हुने बैंकहरूले व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा स्थिर ब्याजदर तोकेका हुन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार अधिकांश बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका छन् । केही बैंकहरुले स्थिर ब्याजदरका लागि निश्चित प्रतिशत नै तोकेका छन् ।
केही बैंकले स्थिर ब्याजदरमा समेत बेस रेटका आधारमा निश्चित प्रिमियम थप गर्ने जनाएका छन् । तथापि, आधारदर परिवर्तन हुने भएकाले यसलाई स्थिर ब्याजदर भन्ने कि नभन्ने अझै अन्यौलता छ । अधिकांश बैंकहरूले सेयर कर्जा, घर कर्जा, सवारी कर्जा र शैक्षिक कर्जामा ८.५०% देखि १५% ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर राख्न निर्देशन दिएको छ ।
तथापि, ग्राहक स्वयंले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधारदर परिवर्तन हुँदा ब्याज पनि परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा यस्तो सुविधा समेत दिन भनिएको छ । बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर सहितको सूची प्रकाशित गरेका छन् । हेरौं, कुन–कुन बैंकले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हायर पर्चेज कर्जा ५ वर्षका लागि साढे ९.५०%, घर कर्जाका लागि ९% देखि ११% ब्याजदर, व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर १०% देखि ११% सम्म तोकिएको छ । बैंकको असार मसान्तसम्मको आधारदर ५.८०% रहेको छ । बैंकले सम्बन्धित त्रैमास भित्रै ब्याज भुक्तान गरेमा ०.५०% छुट हुने जनाएको छ । यता, मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६% देखि ७.२५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ भने संस्थागततर्फ ५% देखि ६.५०% सम्म ब्याजदर छ । त्यसैगरी, बचततर्फ न्यूनतम ३% देखि अधिकतम ५% सम्म ब्याजदर तोकिएको छ ।
हिमालयन बैंकले बचत र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । स्थिर ब्याजदरका लागि बैंकबाट घर कर्जा लिंदा न्यूनतम ९.९९% देखि १२.४९% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट शैक्षिक धितो कर्जामा ९.९९% देखि १०.९९% सम्म ब्याज लाग्ने छ । व्यक्तिगत कर्जा ९.९९% सम्म रहेको छ । असार मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ८.३८% रहेको छ । बैंकका अनुसार व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ९% र न्यूनतम ३% ब्याजदर दिन्छ । यस्तै, बचतमा न्यूनतम ०.२५% देखि ४% सम्म रहेको छ ।
व्यक्तिगत कर्जा ५ वर्ष सम्मका लागि १३% ब्याजदर, सवारीसाधन कर्जा १०.७५% देखि ११.७५% सम्म, घर कर्जा १०.७५% देखि १३.७५% सम्म (५ देखि १० वर्ष सम्मको) ब्याज दर निर्धारण गरेको छ । यसको असार मसान्तसम्मको आधार दर ७% रहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७ वर्ष अवधिको गाडी किन्न १०.७५% ब्याजदरमा ऋण दिनेछ । यस्तै, घर कर्जाका लागि १० वर्षको ब्याजदर १२.५०% छ । बैंकले ७.९९% देखि १३% ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको भदौ मसान्तसम्मको आधार दर ८.३९% रहेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा न्यूनतम ५% देखि अधिकतम ९% सम्म ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ५.५०% देखि ६.५०% ब्याजदर निर्धारण भएको छ ।
प्रभु बैंकले ५ वर्षसम्मको घर कर्जामा ९.९९% र गाडी खरिदका लागि १०.२४% ब्याजदर तोकेको छ । ५ देखि १० वर्षसम्मको घर कर्जाका लागि १०.९९% र गाडीका लागि ११.२४% ब्याजदर कायम गरेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ६% र न्यूनतम ४% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ४% देखि ७% ब्याज पाइनेछ । यता, बैंकले बचततर्फ न्यूनतम ३% देखि अधिकतम ४.५०% सम्म ब्याज दिने जनाएको छ । यस बैंकको भदौ मसान्तसम्म आधारदर ८.३९% छ । यसैलाई आधार मानेर ऋण दिनेछ । यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । जस अनुसार सेयर कर्जा, घर कर्जा, गाडी र शैक्षिक कर्जामा ५% प्रिमियम थप गरेर कर्जा उपलब्ध हुने बैंकको भनाई छ ।
मेगा बैंकको घर कर्जाका लागि आधार दरमा ५% सम्म ब्याजदर तोकिएको छ । यसको अटो लोन, शैक्षिक कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा सबैमा ५% तोकिएको छ । भदौ मसान्तसम्म यसको आधार दर ८.१०% रहेको छ ।
नबिल बैंकले १५ वर्षसम्मका घर र गाडीको लागि ११% ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि १०.५०% ब्याजदर तोकेको छ । यस बैंकको भदौ मसान्तसम्म आधार दर ६.८४% छ । यसैलाई आधार मानेर ऋण दिनेछ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९% र न्यूनतम ५% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ४% देखि ८% ब्याज पाइनेछ । यता, बैंकले बचततर्फ न्यूनतम २% देखि अधिकतम ४% सम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
माछापुच्छे् बैंकले घर कर्जा ५ वर्षसम्मका लागि ९.८९%, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि १०.८९% र १० वर्षदेखि माथिका लागि ११.८९% ब्याजदर तोकिएको छ । यता, अटो कर्जा ९.९% देखि १०.९९% सम्म रहेको छ । अन्य रिटेल कर्जामा १०.२४% देखि १२.२४% सम्म ब्याजदर रहेको छ ।
सिभिल बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९% र न्यूनतम ७.७५% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दतिमा ५.१०% देखि ६.६०% ब्याजदर निर्धारण भएको छ । बचतमा न्यूनतम ४% देखि अधिकतम ५% सम्म ब्याजदर दिनेछ । बैंकको भदौ मसान्तसम्मका आधार दर ९.०७% रहेको छ । यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । जसअनुसार घर कर्जा (२.५०%–४%), गाडी कर्जामा ३%, प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिनेछ ।
कृषि विकास बैंकले १० वर्ष भन्दा माथिको घर कर्जामा ११.२५% स्थिर ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, ७ वर्षसम्मको गाडी खरिदका लागि १०.५०% ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले घर कर्जाका लागि ९.४९% देखि १२.२४% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । यो ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिको हो । वातावरण मैत्री घरका लागि ०.५०% ब्याजदर कम हुने बैंकले जनाएको छ । व्यक्तिगत कर्जा १०.४९% देखि १३.२४% सम्म छ । अटो कर्जा ९.४९% देखि ११.२४% सम्म रहेको छ । बैंकको असार मसान्तसम्म आधारदर ८.९५% छ ।
सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.२५% र न्यूनतम ५.५०% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ७.१०% ब्याज पाइनेछ । यता, बैंकले बचततर्फ न्यूनतम ०.२५% देखि अधिकतम ४.७५% सम्म ब्याज दिने बताएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले १५ वर्षसम्मको घर कर्जामा ११.९०% ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, ५ वर्षसम्मको गाडी खरिदका लागि ११.९९% ब्याजदरमा ऋण दिने सार्वजनिक गरेको छ । समय अनुसार फरक फरक ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
बैंक अफ काठमान्डू
बैंक अफ काठमान्डूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ७.२५% र न्यूनतम ४.५०% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ६.६०% ब्याज पाइनेछ । बैंकको भदौ मसान्तसम्म आधार दर ८.८७% छ । बैंकले घर कर्जा (१० वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका लागि) १०.९८% देखि १२.९८% सम्म, हायरपर्चेज (५ वर्षदेखि सोभन्दा माथिका लागि) ९.९९% देखि ११.४९% सम्म ब्याजदर रहेको छ । शैक्षिक कर्जा, सेयर कर्जा, आवास कर्जा र अन्य कर्जामा अधिकतम ११.९९% सम्म ब्याजदर लिने छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्षसम्म वा सो भन्दा बढी अवधिका लागि ९.९९% ब्याज दरदेखि १०.९९% सम्म रहने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, घर कर्जा ९.९०% देखि ११.९०% सम्म रहनेछ । अवधि अनुसार यो ब्याजदर लागू हुनेछ । शैक्षिक कर्जा र प्रोफेसनल लोनका लागि १२.९०% सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९% र न्यूनतम ७.२५% ब्याज पाइन्छ । संस्थागत मुद्दतिमा ५.५०% देखि ६.५०% ब्याजदर निर्धारण भएको छ । बचतमा न्यूनतम ३% देखि अधिकतम ५% सम्म ब्याजदर दिनेछ । यता, यस बैंकले १ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको घर कर्जाका लागि ८.४९% देखि १३.९९% सम्म ब्याजदर तोकेको छ । शौक्षिक कर्जामा पनि १ देखि १५ वर्षसम्म ८.४९% देखि १४.४९% सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
अटो लोनमा न्यूनतम ८.४९ देखि अधिकतम १३.९९% ब्याजदर कायम गरेको छ । यसमा १ वर्षदेखि १० वर्ष अवधि सम्मका लागि ऋण रहेको छ । यता व्यक्तिगत कर्जामा पनि ९.९९% देखि १४.४९% सम्म रहेको छ । यसले असोजको बेसरेट यस ब्याजदरमा कायम रहने भने पनि असोजको बेसरेट खुलाएको छैन । तथापि, भदौसम्म यसको बेसरेट ८.३३% रहेको छ ।
सनराइज बैंकले मद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७% देखि ९.७५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ भने संस्थागततर्फ ६.६०% देखि ९.१०% सम्म ब्याजदर छ । त्यसैगरी, बचततर्फ न्यूनतम १% देखि अधिकतम ४% सम्म ब्याजदर तोकिएको छ । यसको भदौ मसान्तसम्मको आधार दर ७.९९% छ । बैंकले अधिकांश कर्जामा न्यूनतम १०.५०% देखि अधिकतम १३.५०% सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकले मद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.२५% देखि ९.७५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ भने संस्थागत तर्फ ७% देखि ९.५०% सम्म ब्याजदर छ । त्यसैगरी, बचततर्फ न्यूनतम १.५% देखि अधिकतम ३.५% सम्म ब्याजदर तोकिएको छ । यसको भदौ मसान्तसम्मको आधार दर ६.९८% छ । बैंकले अधिकांश कर्जामा न्यूनतम १३% देखि अधिकतम १५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
नेपाल बैंकले मद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६.२५% देखि ८.२५% सम्म ब्याजदर तोकेको छ भने संस्थागततर्फ ५.५०% देखि ७.५०% सम्म ब्याजदर छ । त्यसैगरी, बचततर्फ न्यूनतम २.५०% देखि अधिकतम ४.५०% सम्म ब्याजदर तोकिएको छ । यसको असार मसान्तसम्मको आधार दर ६.९९% छ । यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । बैंकले अधिकांश कर्जामा न्यूनतम ९.३५% देखि अधिकतम १३.९३% सम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
यस बैंकले पनि व्यक्तिगत आवधिक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्ष अवधिको घर कर्जा ११.४९%, १० वर्षका लागि ११.९९%, १० वर्ष भन्दा माथिका लागि १२.९४% ब्याजदर कायम हुने सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सवारी कर्जा र व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर ११.९९% देखि १२.९९% सम्म रहेको छ । यस बैंकको भदौसम्मको आधार दर ८.७६% रहेको छ ।